Xuska Sanad guuradii 7-aad ee ka soo wareegtay Aas-aaskii Naadigga Saxaafadda Soomaaliyeed oo Muqdisho lagu qabtay
Monday July 05, 2010 - 04:20:55 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Sanad guuradii 7-aad ee Aas aaska Naadigga Saxaafadda Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay Xarunta KMG ah ee Naadigaas uu ku leeyahay Magaaladda Muqdisho.
Xafladaan oo ay ka soo qaybgaleen in ka badan laba boqol oo bahda Saxaafadda ah ayaa Shahaado lagu gudoonsiiyay shan arday oo dhameeysatay Waxbarashadda,taas oo ahayd laba sanadood.
Weriyaasha Juunyeerka ah ee Maanta Shahaadada la gudoonsiiyay ayaa kala ah ,Maxamed Bashiir Cabdi Raxmaan,Cabdilahi Dahir Maxamed,Faysal Maxamud Cali,Sahro Maxamud Cali,Sagal Cismaan Coloow.
Gudoomiyaha Naadigga Saxaafadda Soomaaliyeed Inj Mukhtaar Xasan Maxamud oo khudbad gaaban ka jeediyay Xafladaas ayaa sheegay in markii la aas aasayay Naadigaas ay Saxaafadda ku ekeeyd Muqdisho iyo Hargeysa oo qura,balse ay haatan mareeyso Dhamaan Goboladda Dalka oo dhan,sidaas si la midana ay Naadigaan ka baxeen Saxaafiyiin ka badan afar boqol,kuwaas oo 80% ay hada ku shaqeeystaan xirfadaas.
Injineer Mukhtaar wuxuu ku nuuxnuuxsaday in Wariyaasha Waxbarashadda ka qaata Naadigga aan wax lacag ah laga qaadin oo qaab samafala ,wax loo baro.
Cilmi Cismaan faarax Boodhari oo ka mida Wariyaasha ugu caansan Muqdisho,si wayna loo xiiseeyo qaab wareedkiisa ,una hadlayay Jiilka Cusub ee Saxaafadda ayaa farta ku fiiqay in Saxaafadda %90 ay u dadaasho horumarka dalka sida ,Waxbarashadda,dhaqaalaha Caafimaadka iyo wacyigelinta guud ee bulshadda,isagoo dhinaca kalana xusay inay Wariyaasha Muqdisho ku hoowlgalaan nolol adag,maadama aysan helin mushaaraad ku filan.
Madaxa Warfaafinta ee Golaha Maxaakiimta Sheekh Cabdi Raxiim Muudeey oo isagana halkaas ka hadlay ayaa Suxufiyiinta ugu baaqay inay ka qaybqaataan Difaaca Dalka iyo Diinta,isagoo dhinaca kalana Xusay inaysan Saxaafadda Soomaaliya dhex dhexaad ka noqon Karin arrimaha jira,marka la eego cadowga dalka ku soo wajahan ee Tigreegga.
Naadigga Saxaafadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaamaa kobciyaha Waxbarashadda Saxaafadda Soomaaliya,isagoo noqonayo Naadigga bixiyay tababarkii ugu badnaa ee Warfidiyeenadda Soomaaliya la siiyo.